Qalabka injineernimada tamarta iyo qalabka Warshad | Qalabka koronto ee Shiinaha Power iyo alaab Soosaarayaal, Shirkado
aluminium ABC fiilada dusha sare ee korantada dusha sare ama danab dhexdhexaad ah
Aerial Bond Conductor (ABC cable) waa fikrad aad u cusub oo ku saabsan awood qaybinta korka marka loo eego nidaamka qaybinta mashiinka qaawan ee caadiga ah. Waxay bixisaa heer sare oo nabadgelyo iyo kalsooni leh, hoos u dhac ku yimaada awoodda iyo dhaqaalaha nidaamka ugu dambeeya iyadoo la yareynayo rakibidda, dayactirka iyo kharashka hawlgalka. Nidaamkani wuxuu ku habboon yahay qaybinta reer miyiga wuxuuna si gaar ah ugu habboon yahay rakibidda dhulalka adag sida aagagga buuraha, aagagga kaynta, meelaha xeebta iwm.
Fiilooyinka korontada ee PVC (fiilada korantada caagga ah) waa mid ka mid ah wax soo saarka tayada sare leh ee shirkadeena. Shayga kaliya maahan awood koronto oo wanaagsan, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay xasilinta kiimikada wanaagsan, qaabdhismeed fudud, fududahay in la isticmaalo, iyo dhigista xariggu kuma koobna dayrta. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa wareegga wareegga kaas oo lagu qiimeeyo danabku waa 6000V ama ka hooseeya.
1. Isticmaal koronto-dhaliye oo ah birta tayada-sare leh waa dahaarka dhumucda - 2MM ilaa 6MM.
2. Ku qalabaysan cufnaanta sare ee qalabka cod-nuugista - dahaarka codka, ka-hortagga dabka.
3. Generator ku qalabeysan 12V / 24V DC baytari leh xeedho, batteriga wuxuu isku xiraa silig.
4. Generator ku qalabeysan 10-12 saacadood oo haanta shidaalka oo leh tilmaame shidaal, waqti dheer oo lagu shaqeynayo.
Taxanaha golaha wasakhda awood qeybinta wuxuu ku haboonyahay AC 50 Hz, danab lagu qiimeeyay ilaa 0.4 KV gudbinta awooda iyo nidaamka qeybinta. Taxanaha alaabtan ayaa isugu jira magdhaw otomaatig ah iyo awood qaybsi. Waana mid hal abuur leh gudaha iyo dibeddaba cadaadis qaybinta cadaadiska ilaalinta soo daadashada korantada, cabirka tamarta, ka-badnaanta xilligan, ilaalinta wejiga furan ee cadaadiska badan. Waxay leedahay faa'iidooyinka mug yar, rakibid fudud, qiimo jaban, ka hortag koronto-xatooyo, la qabsi xoog leh, iska caabin gabow, rotor sax ah, qalad magdhow ma leh, iwm Sidaa darteed waa sheyga ugu fiican ee la doorbido ee dib u habeynta shabakada korantada.